You searched for धनी व्यक्ति - Page5of5- Tech News Nepal Tech News Nepal
अब सरकारको स्वीकृति बिना टेलिकम कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने
काठमाडौं । अब सरकारको स्वीकृति बिना दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री गर्न सरकारको
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाका ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट सफ्टवेयरले नै रोक्ने भएको छ । सहकारीहरुमा ट्रस्टएमल सिस्टम प्रयोग गरी यस किसिमको गतिविधि रोक्न डेटम सिस्टम्स
टिकटकसँग किन डराइरहेको छ अमेरिका ?
काठमाडौं । चीन कस्तो बनेको हेर्न चाहन्छ अमेरिका ? बाइटड्यान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संस्थापक झाङ यिमिङ यसबारे बताउँछन् । बाइटड्यान्स त्यही कम्पनी हो, जसको मातहतमा टिकटक चल्छ । चीनमा
Published On : 12 August, 2020
न्यूरलिङ्क चिपबाट सोझै दिमागमा गीत प्रसारण गर्न सकिने ईलोन मस्कको दाबी
यसलाई आधुनिक प्रविधि नै मान्नुहोस्, एउटा यस्तो चिप तयार भइसकेको छ, जसले दिमागमा गीतहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्छ । विश्वको सबैभन्दा धनी कार कम्पनी टेस्लाका सीईओ ईलोन मस्कले यो विषयको
काठमाडौं । नेपाल तथा बंगलादेशमा चर्चित राइड शेयरिङ एप पठाओका संस्थापक फाहिम सलेहको हत्या भएको छ । न्युयोर्कको मेनहट्टनस्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा ३३ वर्षे आईटी उद्यमी सलेहको शव फेला परेको हो
काठमाडौं । २०१५ तिर उद्धवराज भेटवाल कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्थे । त्यसताका उनको अवचेतन मनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण विवरण, जानकारी तथा सरोकारवालाहरुलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन सके मानिसहरुलाई सहजता
बेलायतको ग्वाभा पेबाट सोझै सिटी एक्सप्रेसमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने
काठमाडौं । बेलायतको ख्यातिप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी ग्वाभापे लिमिटेडबाट सिटी एक्सप्रेसमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको छ । दुई कम्पनीबीच भर्खरै भएको सम्झौताबाट रेमिटान्स कारोबार सुरु भएको हो । बेलायतमात्र नभई
Published On : 1 June, 2020
माइक्रोसफ्टको बोर्डबाट किन बाहिरिए बिल गेट्स ?
अहिलेका विश्वका दोश्रो धनी अर्बपति बिल गेट्स आफूले चार दशक अघि स्थापना गरेको सफ्टवेयर जायन्ट माइक्रोसफ्टको बोर्डबाट बाहिरिएका छन् । गेट्सले शुक्रबार आफू बार्कसार हाथवेको बोर्डबाट समेत विदा भएको बताए,
एनसेल खरिद–बिक्रीमा देखिएको जस्तै विवाद रोक्न छुट्टै कानून
काठमाडौं । यस अघि एनसेल र हेलो नेपालको सेयर खरिद बिक्रीमा देखिए जस्तो विवाद अब अन्त्य हुने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा देखिने
मेरो परिवारको पृष्ठभुमी नै लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रसँग जोडिएको छ । हाम्रो परिवार पछिल्लो २० वर्षयता सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि म सार्वजनिक सवारीसाधन नै प्रयोग गर्छु
Published On : 19 October, 2019